Ungase ngephutha isusiwe othintana, SMS, izithombe, amavidyo noma amafayela efonini yakho ye-Android. Ungabi ecasukile, kufanele azame ukuthola i-data ngokushesha ngangokunokwenzeka. Futhi sicela ukhumbule ungasindisi noma ufake lutho kudivayisi yakho noma uyicime uze uzame yokutakula. Ngoba wedatha esusiwe kungenzeka overwritten yinoma yimuphi okuqukethwe okusha.
Indlela ukuze alulame isusiwe imiyalezo ku-Android
Indlela ukuze alulame izithombe asusiwe ku divaysi ye-Android
Amalungiselelo ukuze alulame idatha ku-Android
Ngaphambi ukulithola idatha elahlekile, kufanele ufake Android Data Recovery iyithuluzi. Kuyoba scan imemori yefoni yakho ye-Android, zama ukuthola idatha yakho kususiwe bese ezithola.
Hlola ibhethri Android yakho, qiniseka ngeke ivalwe inqubo yokutakula.
Vumela kwe-USB kungasebenzi ku-Android yakho.
Indlela ukuze alulame idatha isusiwe ku-Android
Ngemva kokwenza amalungiselelo ngenhla, alulame idatha yakho kususiwe kuwumsebenzi silula. Udinga nje kuphela ngokuchofoza izinkinobho ezimbalwa.
Step 1: Xhuma idivayisi yakho
Xhuma idivayisi yakho kwikhompyutha futhi uqalise futhi ithuluzi Android Data Recovery.
Step 2: Thola idivayisi yakho
Isofthiwe izozama ukuxhuma idivayisi yakho nekhompyutha yakho. Uhlelo lokusebenza okuthiwa MobileGo izofakwa ngokuzenzakalela efonini yakho ukuqinisekisa uxhumano nokululama izinqubo. Futhi sicela ungaqali yimuphi omunye isofthiwe ukuphathwa Android ngesikhathi le nqubo.
Inothi: Uma ukulungisa iphutha le-USB kuyinto vimbela, uhlelo uyonifundisa kanjani amandla.
Step 3: Lungela scan idivayisi
Manje isofthiwe ilungele scan idivayisi yakho ye-Android. Uzobona iwindi kanje. Khetha izinhlobo idatha ofuna alulame: othintana, SMS, Amalogi Call, imiyalezo Whatsapp & nezinamathiselo, izithombe, imiqophi, alalelwayo, noma ezinye amafayela. Hlola bese uchofoza Next ukuqhubeka.
Khona-ke uzocelwa ukuthi ukhethe ukuskena amafayela asusiwe noma wonke amafayela. Ngokusobala, scan amafayela kusulwe kuphela kuzothatha isikhathi esingaphansi.
Ukuze ubuyise idatha eningi, isofthiwe uyosiphula kudivayisi yakho ngokuzenzakalelayo bese ulithumela isimo unrooted emva inqubo yokutakula.
Step 4: Qala Scan
Lolu hlelo luzo luzosiza scan ifoni yakho ye-Android for the wedatha esusiwe. Ngemva kwemizuzu embalwa, inqubo kumele aqede. Yonke idatha ukuyithola izofakwa ohlwini. Khetha idatha okumele walulama futhi uchofoze Alulame. Ungakhetha indlela kukhompyutha yakho ukuze ulondoloze idatha walulama njengoba HTML noma ifayela TXT.
Inothi: Isofthiwe Android Data Recovery abakwazi ukubeka noma yikuphi okuqukethwe ukuyithola emuva efonini yakho ngqo.
Indlela ngeke ulahlekelwe idatha yakho futhi
Idatha abunakuqhathaniswa. Nokho, yokutakula idatha kuyabiza. Kufanele kubunjwe umkhuba omuhle uyawagcina amakhophi agade umonakalo njalo.
Kunezindlela eziningi kangaka ukuze isipele idatha Android yakho. Ungakwazi ngqo ukukopisha izithombe, imiqophi, alalelwayo, kanye namanye amaphepha emvume kwikhompyutha. Ukusebenzisa Izikhungo Backup-Google ukuvumelanisa oxhumana, SMS, ikhalenda, njll. ku-akhawunti yakho ye-Google.
Ukudlulisa Ifayela ye-Android isofthiwe ewusizo kakhulu ukuthi angakwazi isipele idatha Android yakho kwikhompyutha yakho. It has kokubili amawindi and Mac version. Ungalanda ngezansi.
Izinyathelo isipele Android okukodwa
1. Qalisa isofthiwe bese uxhuma ifoni yakho kwikhompyutha yakho. Chofoza Isipele Hambayo yakho phezu eliyisiqalo isofthiwe.
2. Isofthiwe kungaba ibhekhaphu yoxhumana nabo, imiyalezo, Amalogi Call, Izinhlelo zokusebenza, alalelwayo, imiqophi, izithombe kanye amakhalenda. Thikha labo ofuna bese uchofoze Qala Dlulisa. Amafayela isipele uyakusindiswa ngokuzenzakalelayo ku-C:\_Abasebenzisi Administrator Imibhalo Wondershare MobileTrans Backup. Ungashintsha ugcine indlela Izilungiselelo.
Posted on September 8, 2015 September 11, 2015 Umbhali WillIzigaba Android Data RecoveryAmathegi Android, Android Data Recovery
Langaphambilini post Previous: Indlela Bethela a-Drive USB Mahhala
Next post Next: Indlela Phinda ususiwe imiyalezo ku Ucingo Android